Badbaadi oo barwaaqoo! UNWTO, waa waqtigii dib loo qaabayn lahaa dalxiiska!
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Dowladda » Badbaadi oo barwaaqoo! UNWTO, waa waqtigii dib loo qaabayn lahaa dalxiiska!
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Faallo • Wararka Dowladda • News • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Waaxda dalxiiska ayaa aad iyo aad u eegaysa Sacuudi Carabiya si ay u hesho hagid iyo taageero. Tani waxay iska caddahay maanta guddiga gobolka ee UNWTO u qaabilsan Afrika oo ku shiraya Cabo Verde. “Waxaa la joogaa waqtigii dib loo qaabayn lahaa dalxiiska mustaqbalka” waxay ahayd farriintii hoggaamiyaha Sucuudigu u diray Dalxiiska Adduunka iyo Afrika.
Kulanka 64 -aad ee Guddiga UNWTO ee Afrika ayaa ka socda Sal, Cabo Verde, Hotel Hilton.
Qodobbada laga wada -hadlay waxaa ka mid ah in la cusbooneysiiyo qabyo -qoraalka Xeerka Caalamiga ah ee Ilaalinta Dalxiisayaasha, diyaarinta Shirweynaha Guud ee soo socda, iyo magacaabidda musharraxiinta.
Xiddigga dhacdadan ayaa ka yimid Sucuudiga. HE Axmed al-Khadiib, Wasiirka Dalxiiska ee Sacuudi Carabiya, ayaa soo jeediyay hadalo ka guuxayay intii ay socotay munaasabadda iyo wufuuddii la socotayba.
UNWTO ayaa leh lix guddi goboleed - Afrika, Ameerika, Bariga Aasiya iyo Baasifigga, Yurub, Bariga Dhexe, iyo Koonfurta Aasiya. Guddiyadu waxay kulmaan ugu yaraan sannadkiiba hal mar waxayna ka kooban yihiin dhammaan Xubnaha Buuxda iyo Xubnaha Ku -xigeenka ee ka soo jeeda gobolkaas. Xubno ka tirsan gobolka ayaa ka qaybgala goobjooge ahaan.
Intii lagu guda jiray xiisadda COVID-19, hal xubin oo ka tirsan UNWTO ayaa istaagay ka qeybgalka dhammaan shirarka guddiga gobolka ee adduunka oo dhan ilaa hadda.
Xubintaan waa Boqortooyada Sacuudi Carabiya, oo uu wakiil ka yahay Mudane Ahmed al-Khatib, Wasiirka Dalxiiska.
Axmed al-Khadiib | Zurab Pololikashvili
Wasiirka ayaa loo arkaa inuu yahay “xiddig” aan muran ka taagnayn shirar kasta ama munaasabad kasta oo uu ka qaybgalo, wuxuuna ka qaybgalaa in badan, taasoo muujinaysa sida ay uga go’an tahay socdaalka iyo warshadaha dalxiiska adduunka.
Sacuudi Carabiya waxay ku bixisay balaayiin si ay u caawiso waaxdan ma aha oo kaliya Boqortooyada laakiin meel kasta oo adduunka ah. Hamiga ah in Riyadh la keeno xarun Safar iyo Dalxiis waxaa ka mid ah dhaqaajinta xarunta UNWTO.
Ergooyinka maanta ku jira Guddiga Gobolka ee UNWTO u qaabilsan Afrika waxay aad u dhegeysteen markii Mudane Ahmed al-Khatib uu khudbad u jeedinayey wufuudda. Wuxuu soo saaray qodobbada soo socda:
Faafida ayaa hoosta ka xariiqday baahida degdegga ah ee iskaashiga caalamiga ah ee xooggan, isuduwidda, iyo hoggaaminta.
Waxaan la shaqeyneynaa la-hawlgalayaasheeda Afrika oo dhan si aan u hubinno in warshadaha dalxiiska adduunka ay ku dhisaan casharrada COVID-19.
Ma awoodi karno qalalaase caalami ah oo waxyeelleeya waaxda mustaqbalka sida uu yeelay.
Laakiin waxaan hayaa farriin xooggan oo togan oo aan maanta la wadaago. Waxaan hadda tallaabo qaadi karnaa si aan u hubinno in qaybtan muhiimka ah la xoojiyo si ay u waajahdo caqabadaha mustaqbalka.
al-Khatib wuxuu soo koobay farriintiisa:
Badbaadi oo barwaaqoo!
… Waa waqtigii dib loo qaabayn lahaa dalxiiska mustaqbalka!
Saamaynta COVID-19 ku yeelanayo waaxda Dalxiiska ee Afrika
Saamaynta COVID-19 ku yeelatay dalxiiska caalamiga ah ee Afrika waxay dhalisay hoos u dhac 74% tirada dalxiisayaasha caalamiga ah iyo 85% marka la eego rasiidhada dalxiiska caalamiga ah. Xogta 2021 ayaa muujineysa in gobolka uu hoos u dhac ku yimid 81% soo-galeyaasha caalamiga ah 5-tii bilood ee ugu horreysay 2021 marka la barbardhigo 2019. Saamaynta ay ku yeelanayaan maamul-hoosaadyada ayaa muujinaya in Waqooyiga Afrika ay lumiyeen 78% imaanshiyayaashii sannadka 2020 iyo Saxaraha Afrika 72%.
Isbeddelkan oo kale ayaa ku jira xogta 2021 oo muujinaysa hoos u dhac 83% iyo 80% siday u kala horreeyaan 5 -tii bilood ee ugu horreysay sannadka.
Laga bilaabo Juun 1, 2021, Afrika waxay haysaa heer aad u hooseeya oo xaddidaadaha safarka ah marka loo eego gobollada kale ee adduunka, sida ku xusan warbixinta 10 -aad ee UNWTO ee xannibaadaha safarka. 70% dhammaan meelaha loo tago Aasiya iyo Baasifigga ayaa gabi ahaanba xiran, marka la barbardhigo kaliya 13% Yurub, iyo sidoo kale 20% Ameerika, 19% Afrika, iyo 31% Bariga Dhexe.
Xogta laga heli karo Raadraacaha Soo -kabashada Dalxiiska ee UNWTO ee tilmaamayaasha warshadaha kala duwan ayaa xaqiijinaya isbeddellada saamaynta ee kor ku xusan.
Xog laga helay Ururka Caalamiga ah ee Duulista Rayidka (ICAO) ayaa muujinaya in awoodda hawada gudaha ay hoos u dhacday 33% marka la barbar dhigo 2019 illaa Luulyo, halka awoodda waddooyinka caalamiga ah ay hoos u dhacday 53%. Dhanka kale, xogta ku saabsan ballansashada safarka hawada ee ForwardKeys ayaa muujineysa in 75% hoos u dhac weyn ku yimid kaydinta hawada ee dhabta ah.
Labada natiijoba si kastaba ha ahaatee marka la barbardhigo waxay ka fiican yihiin celceliska adduunka oo awoodda hawada ee waddooyinka caalamiga ahi ay hoos u dhacday 71% iyo ballansashada 88%.
Xogta STR waxay muujineysaa in gobolka uu gaaray 42% dadka deggan hoteelka bishii Luulyo 2021, taasoo ah horumar cad oo la gaaray 2021. Qeybaha hoose, Waqooyiga iyo Saxaraha Afrika (38% iyo 37% siday u kala horreeyaan) waxay muujinayaan natiijooyin ka wanaagsan kuwa Koonfurta Afrika (18%) halka xaaladda ayaa ka sii dartay bishii July.
Dhismaha Xafiisyada Gobolka ee UNWTO
5-ta dal ee xubnaha ka ah gobolka Afrika ee soo socda: Koonfur Afrika, Marooko, Gaana, Cabo Verde, iyo Kenya ayaa si rasmi ah ugu wargeliyay Xoghayaha Guud sida ay u danaynayaan in la sameeyo Xafiiska Gobolka ee UNWTO ee Afrika si loo xoojiyo iskaashiga iyo taageerada, sidoo kale iyada oo dhammaystiri doonta hirgelinta Ajendaha Afrika-Dalxiiska ee Kobcinta loo dhan yahay iyo in la soo bandhigo hannaanka baahinta hawlaha UNWTO iyo hawlgallada si loogu waafajiyo si dhow baahiyaha iyo mudnaanta Dawladaha xubinta ka ah Afrika.
Guddiga Dhibaatada Dalxiiska Caalamka
Warbixinta loo soo bandhigay wafuudda ku sugan Cabo Verde, ayuu Xoghayaha Guud ku sheegay warbixintiisa si loo hubiyo jawaab-celin isku-dhafan oo wax-ku-ool ah, Xoghayaha Guud wuxuu la aasaasay Guddiga Dhibaatada Dalxiiska Caalamiga ah daneeyayaasha caalamiga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay, kuwaas oo qabtay kulankiisii ​​ugu horreeyay wuxuu dhacay Maarso 19, 2020.
Guddigu wuxuu ka kooban yahay UNWTO, wakiilo ka socda Dawladaha Xubinta ka ah (Guddoomiyayaasha Golaha Fulinta ee UNWTO iyo lix Guddi Goboleed iyo weliba qaar ka mid ah dawladaha ay soo magacaabeen Guddoomiyeyaasha Komishanku), Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO), Ururka Duulista Hawada ee Caalamiga ah (ICAO) ), Ururka Caalamiga ah ee Badaha (IMO), Ururka Shaqaalaha Adduunka (ILO), Ururka Iskaashiga Dhaqaalaha iyo Horumarinta (OECD), Adduunka
Bangiga (WB), iyo waaxda gaarka loo leeyahay - Xubnaha Xiriiriyaha UNWTO, Golaha Garoomada Caalamiga ah (ACI), Ururka Caalamiga ah ee Cruise Lines (CLIA), Ururka Gaadiidka Cirka ee Caalamiga ah (IATA), iyo Golaha Socdaalka iyo Dalxiiska Adduunka (WTTC).
Kadib shirarkii guddiyada qalalaasaha 6, waxay go'aansatay in la abuuro guddi farsamo si loo abuuro jaangooyooyin iyo hab -maamuusyo caalami ah si mar kale dib loogu bilaabo dalxiiska.
8 -dii Abriil, kulankeedii 9aad, Guddigu wuxuu ku taageeray Talooyinkii UNWTO ee ahaa in dib loo bilaabo Dalxiiska oo ka kooban 4 aag oo muhiim ah: 1) In dib loo bilaabo socdaalka xuduudaha ee nabdoon; 2) Kor u qaad safar ammaan ah dhammaan meelaha safarka; 3) Siinta habsami u socodka shirkadaha iyo ilaalinta shaqooyinka; iyo 4) Soo celi kalsoonidii dadka socotada ah
Hoosta hashtag #traveltomorrow, UNWTO ayaa soo saaray warbixin ku saabsan taageeridda shaqooyinka iyo dhaqaalaha iyada oo loo marayo safarka iyo dalxiiska.
Dadka gudaha ku jira oo ka socda qaar ka mid ah ururada lagu sheegay warbixinta Xog-hayaha Guud ayaa aad u yaraa xamaasadda.
Goorma eTurboNews weydiiyay madaxa WTTC ku saabsan inta jeer ee shirarka Guddiga Dhibaatooyinka Adduunka, jawaabtu waxay ahayd: Ma hubo inta jeer laakiin ma ahan mid joogto ah. Wax badan kama ogin. Waxaan leenahay xubnaheena guddi hawleed oo kulma toddobaadle in ka badan hal sano.
Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika Cuthbert Ncube wuxuu soo dhaweynayaa farriinta rajada, aragtida, iyo hagitaanka Sucuudigu u sheegayo Afrika.
Wuxuu u sheegay eTurboNews, “The Guddiga Dalxiiska Afrika wuxuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo UNWTO iyo Boqortooyada Sacuudi Carabiya si Afrika looga dhigo 'Meesha U Dhan Xulashada Adduunka.' ”
Mary Kalikawe wuxuu leeyahay,
September 4, 2021 at 19: 13
Bravo Wasiirka Dalxiiska Sacuudiga. Gudoomiyaha Bravo ATB Ncube